वित्तीय बजारका ‘विकेट किप्पर’ सीइओ - Dainik Nepal
वित्तीय बजारका ‘विकेट किप्पर’ सीइओ
दैनिक नेपाल २०७५ साउन १६ गते ९:४५
काठमाडौं, १६ साउन । तरलता ! नाफा नोक्सान ! व्याजदर ! कर्मचारी व्यवस्थापन ! लगानी ! जग्गा कारोबार ! एकै छिन यस्ता शीर्षकलाई टाढा राखियो ।
उनको परिचयको परिधिमा उल्लिखित हरेक शव्द कहीँ न कहीँ अनिवार्य जोडिन्छ । परिवारको पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिन्छ । बाबुआमा दुवै नेपाल सरकारको नेपाल बैंक लिमिटेडका ‘पेन्सनर’ (सेवा निवृत्त) भएकाले पनि जोडिन्छ ।
अझ, उनको परिचयको टाकुरा नै यीनै शव्दका पयार्यबाट बनेको छ । किनभने उनी एउटा सफल बैंक ‘माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हुन् ।
सुमन शर्मा, साधारण नाम र असाधारण व्यक्तित्व । आधा शताव्दिको उमेरमा पनि चिटिक्क देखिन्छन्, स्पष्ट बोल्छन् ।
२०२४ सालमा झापाको भद्रपुरमा जन्मिएका शर्माको परिचय बिराटनगरले बनायो । उनी गोठाटारका स्थायी बासिन्दा हुन्, अहिले । बाबुआमा, श्रीमती र एक छोरासाथ बस्छन् ।
स्कुल जीवनका आम साधारणका कथातिर लागिएन । जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट, अध्ययनको आइरन गेट एसएलसीदेखि उनी कुन यात्रामा लाग्ने भन्ने अलमलमा पनि परेनन् । किनभने उनमा खोजी गर्ने भोक थियो । त्यो भोकको पछि उनले एसएलसपछिका ७ बर्ष बिताए ।
रिसर्च र नयाँ केही गरौं भन्ने चाहनाले कुत्कुत्याएपछि शर्मा विज्ञान संकायको अध्ययनमा लागे । २०४१ सालमा एसएलसी पास भएपछि काठमाडौंको अस्कल कलेजमा आइएसीमा भर्ना भए र भौतिक विज्ञान (फिजिक्स)को अध्ययन थाले ।
केही नयाँ खोजको जाँगर थियो । त्यहि जाँगरले उनलाई फिजिक्समा एमएसम्म डो-यायो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै उत्कृष्ट नम्बरमा पास भए । जब रिसर्चको काम उनले सिध्याए, नाम अरूको आयो ।
‘पैसा आयो होला तर आफुले गरेको काममा अन्य डाक्टर र प्रोफेसरको नाम देखेपछि मेरो मन खिन्न भयो’, दैनिक नेपालसँग शर्मा भन्छन्, ‘जहाँ नाम नै हुँदैन त्यस्तो काम किन गर्ने भनेर मैले रिसर्चको काम छाडें ।’ फिजिक्सको अध्ययन सकिए पनि शर्मा अर्थशास्त्रमा पनि एमए गरिरहेका थिए ।
०४९ सालमा साथीले जागिरका लागि खुलेको ‘भ्याकेन्सी’ भर्नका लागि सुझाव दिए । उनले दिएको आवेदनमा पास भएर तत्कालिन एनएमबी वित्तिय संस्थामा जागिरे भए । एनएमबी बैंक भइसकेको थिएन, बैंक हुने प्रक्रियामा थियो । सम्झन्छन्,‘काम गर्दै जाँदा बैंकमा परिणत हुने चर्चा चलिरहेको थियो । मैले त्यहाँ राम्रै जिम्मेवारीमा पुगुन्जेल काम गरें ।’
१९ औं शताव्दिका लेखक मार्क ट्वाइनले पनि एउटा बैंकर चर्को घाममा छाता ओढाउने व्यक्ति भनेका छन् । उनको वित्तिय कारोबारको योजनाले त्यहि पुष्टि गर्छ । तर, उनी नाफामुखी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने मान्यताबाट पछि हट्न सक्तैनन् । एनएमबीमा मात्रै उनले १० बर्ष बिताए ।
क्रिकेटमा विकेट किप्पर प्रायः निर्णायक ब्याट्सम्यान पनि हुन्छन्, क्याप्टेन पनि हुन्छन् । शर्मा वित्तिय बजारका यस्तै परिचित अनुहार हुन् । त्यसैले पनि माछापुच्छ्रे बैंकले हालैमात्र उनलाई क्याप्टेनको जिम्मेवारी दिएको हो
जति अध्ययनको लगनशीलता उनमा थियो त्यति नै महत्वकांक्षाको काउकुती । पत्रिकाहरूमा आएका वित्तिय संस्थाका जागिरका भ्याकेन्सीहरूमा आँखा दौडिरहन्थ्यो । उनले कुनै विज्ञापन देखे, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यावसायीक प्रशासनमा स्नात्तकोत्तर (एमबीए) न्युनतम योग्यता । उनले एमबीए गरेका थिएनन् । शर्मा सम्झन्छन्,‘त्यो विज्ञापनले मेरो मथिङ्गल फरक बनायो । मेरो यति अध्ययनले पनि म बैंकको मुख्य ठाउँमा वा जिम्मेबारीमा नपुग्ने जस्तो देखेपछि एमबीए गर्ने रहर जाग्यो ।’
उनले नेदरल्यान्डस्मा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिए । एक बर्षको अध्ययनमा उनी उत्कृष्ट भए । मेडल पनि पाए । त्यसैको परिणामका आधारमा उनले नेपालमा महेन्द्र विद्या भुषण पनि प्राप्त गरेका थिए । सम्झन्छन्,‘अब चाहीँ म पनि कहीँ न कहीँ पुग्छु भन्ने लाग्यो ।’
रेकर्डर अफगर्नुपूर्व उनी अलिक खुले । उनले फ्याट्ट भने,‘म खेलमा क्रिकेटको सौखिन हो ।’
कलेज पढ्दा वानेश्वरमा बस्ने गर्दथे । उनले वानेश्वर क्लवबाट कयन पटक क्रिकेट खेलेका छन्, टिमलाई जिताएका छन् । अहिले पनि क्रिकेटका प्रायः खेलहरूमा रूची राख्छन् तर वित्तिय क्षेत्रको सुधारसहितको नयाँ रणनीतिभन्दा चाहीँ अलिक कम । भन्छन्,‘खेलमा रूची राख्छु । क्रिकेट मनपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित र सबल बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा अलिक व्यस्त छु ।’
उनले बिराटनगरको टोलीबाट पनि धेरै पटक खेलेर जिताएका छन् । बैंकहरूकै क्रिकेट खेलमा पनि उनी जहाँ जहाँ काम गरे, त्यहि बैंकले उपाधी हात पारेको छ ।
क्रिकेटमा विकेट किप्पर प्रायः निर्णायक ब्याट्सम्यान पनि हुन्छन्, क्याप्टेन पनि हुन्छन् । शर्मा वित्तिय बजारका यस्तै परिचित अनुहार हुन् । त्यसैले पनि माछापुच्छ्रे बैंकले हालैमात्र उनलाई क्याप्टेनको जिम्मेवारी दिएको हो । त्यसअघि उनी ग्लोबर आइएमई बैंकमा उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा थिए । ‘मैले पहिला काम गरेको माछापुच्छ्रेले नै मलाई विश्वासका साथ यो जिम्मेबारी दिएपछि म फर्किएँ’, उनी भन्छन् ।
बैंकको बजारमात्र होइन, देशभर उसका हरेक कामका निगरानीदेखि उत्थानको जिम्मेवारी लिएर शर्मा निर्भिकताका साथ अघि बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चढेको केबलकारमा फ्रान्समा अड्कियो